Qasem Soleimani: Muxuu Dilkiisa U Farxad Geliyay Dagaal-yahannada Daacish? • Oodweynenews.com Oodweyne News | Oodweynenews.com Oodweyne News
Qasem Soleimani: Muxuu Dilkiisa U Farxad Geliyay Dagaal-yahannada Daacish?
Kooxda Daacish ayaa soo dhaweysay dhimashada janaraalkii Iiraan u dhashay ee Qasem Soleimani, oo ahaa madaxii cutubka Quds. Warbixin ay soo saareen, ayay ku sheegeen in geerida janaraalka ay faa`iido u tahay dagaal-yahannada. Si kastaba, marna warbixinta laguma sheegin Mareykanka, oo fuliyay weerarkii 3-dii bishan uu ku dhintay Suleymaani ee ka dhacay magaalada Baqdaad. Go`aanka madaxweyne Donald Trump ee lagu dilay janaraal Suleymaani ayaa waxaa ka dhashay cawaaqib xumo is daba joog ah – oo mid ka mid ah ay ahayd dagaalka aan dhammaan ee lagula jiro dagaal-yahannada.
Isla markiiba isbahaysiga uu Mareykanku hoggaamiyo ee la dagaallamayay Daacish waxay joojiyeen howlgalladii ay Ciraaq ka wadeen. Mareykanka iyo xulafadiisa ayaa ku dhawaaqay in muhiimaddooda koowaad ay haatan tahay inay is difaacaan.
Marka laga eego milatari ahaan, ma jiro wax kale oo ay sameyn kareen. Iran iyo maleeshiyaadka ay maalgeliso ee ku sugan Ciraaq ayaa dhaar ku maray inay ka aargoosan doonaan dilka Soleimani. Dilka janaraalka wuxuu faa`iido u leeyahay Daacish, iyagoo degdeg uga soo kaban doona jabkii gaadhay markii la burburiyay khaliifadoodii. Sidoo kale war wanaagsan ayay u tahay dagaal-yahannada mooshinkii uu meel mariyay baarlamaanka Ciraaq ee ay ku dalbanayeen in Mareykanku uu degdeg ciidamadiida ugala baxo Ciraaq. Daacish ayaa in muddo ah keni-adayg muujisay. Waxay kooxdu ka aasaasantay ururka al-Qaeda ee Ciraaq ka dhisnaa. Howlgal milatari oo baaxad leh oo dhacay sanadihii 2016 iyo 2017 ayaa lagu doonayay in lagu baabi`iyo gayiga ay Daacish ka maamusho Ciraaq iyo Suuriya. Dagaal-yahanno badan ayaa geeriyooday qaar kalena xabsi ayay ku dambeeyeen. Balse taas kama takhalusin ururka. Weli kooxdu waxay ku sugan tahay meelihii ay ka joogeen Ciraaq iyo Suuriya.
Gobolka ay Ciraaq ka joogaan waxaa ku sugan ciidamo iyo booliis ay Mareykanku iyo xulafadooda Yurub si gaar ah u tababareen si ay ula dagaallamaan Daacish.
Tan iyo dilkii Soleimani, Mareykanka ayaa joojiyay tababarradii iyo howlgalladii. Sidoo kale Denmark iyo Jarmalka ayaa sidaas sameeyay.
Jarmalka ayaa tababarayaashiisa milatari kala soo baxaya Ciraaq una diraya Jordan iyo Kuwait.
Xoogagga Ciraaq ayaa u bareeray khatarta la dagaallanka Daacish ee gudaha dalkaas, balse waxay ku tiirsanaayeen tababarro iyo caawinaad kale oo ay ka helayeen xoogagga Mareykanka.
Sanadkii 2014, dagaal-yahannada ayaa galay dagaal, iyagoo la wareegay qeybo badan oo ka mid ah Ciraaq, ayna ku jirto Mosul, oo ah magaalada labaad ee ugu weyn dalkaas.
Wadaadka Shiicada ee Ciraaq ku sugan, Ayatollah Ali al-Sistani, ayaa ku baaqay in lala dagaallamo xagjiriinta Sunniga ah.
Dhalinyaro Shiico ah ayaa dagaalka galay iyagoo kumannaan ah – Soleimani iyo xoogaggiisa Quds ayaana qeyb weyn ku lahaa in dhalinyaradaas laga dhigo ciidan. Maleeshiyaadka ayaa ahaa kuwo aanan naxayn.
Sanadihii ka dambeeyay 2014, Mareykanka iyo maleeshiyaadka ayaa yeeshay hal cadow. Balse maleeshiyaadka Shiicada ayaa haatan u muuqda inay ku laabanayaan howlahoodii hore, oo ah la dagaallanka qabsashada Mareykanka kaddib sanadkii 2003.
Waxay dileen dhowr sarkaal oo Ameerikaan ah – iyagoo kaashanaya tababar iyo hub tayo leh oo uu siiyay Soleimani – taasoo ka mid ah sababaha uu madaxweyne Trump u bixiyay amarka ah in la dilo janaraalkaas.
Tan iyo markii Mr Trump uu isaga baxay heshiiskii nukliyeerka Iiraan sanadkii 2018, Mareykanka iyo Iiraan ayaa qarka u saarnaa inay is dagaalaan.
Kahor inta aan Soleimani la dilin maleeshiyaadka Shiicada ayaa beegsanayay saraakiisha Mareykanka.
Weerar dhammaadkii December lagu qaaday saldhig ku yaalla waqooyiga Ciraaq oo uu ku dhintay qandaraasle Mareykan ah ayaa waxaa looga jawaabay weerar ay ku dhinteen 25 dagaal-yahanno ah oo ka tirsan kooxda Kataib Hezbollah.
Hoggaamiyahooda, Abu Mahdi al-Muhandis, ayaa Soleimani kula kulmay garoonka Baghdad, isla gaarigii ay isla saarnaayeen ayaana lagu qarxiyay.